Aung's Investment: မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေလည်း တော်တော်လေး Stableဖြစ်လာပြီး၊ Stock marketလည်း သိပ်ပြီး Volatileဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မထင်တော့တာမို့ ဒီPostကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ Technical Analysisပိုင်းလည်း ရေးနေတာ များနေပြီမို့ Topicပြောင်းတဲ့သဘောလည်း ပါပါတယ်။
အရင်တုန်းကကျွန်တော်အပါအဝင် Stock marketထဲ ဝင်ခါစသူအားလုံးလိုလိုဟာ ကိုယ်စုထားတဲ့ပိုက်ဆံထဲက တချို့တဝက်ကို Investလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ငါးထောင်ဆိုရင် ငါးထောင်၊ တစ်သောင်းဆိုရင် တစ်သောင်း ကိုယ့်မှာ အဆင်ပြေသလိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရေရှည် စီးပွားဖြစ်စလုပ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံချည်းပဲနဲ့တော့ မကိုက်ဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာရှိမယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ဘယ်နUnitမှ သိပ်ဝယ်လို့မရလို့ပါပဲ။
ဒီတော့ ပိုပြီးEfficientဖြစ်ချင်ရင်တော့ သူများပိုက်ဆံကို ယူသုံးရပါမယ်။ Financialလောကမှာတော့ သူများပိုက်ဆံယူသုံးတာကို Leveraging/Gearingလုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ Stock Brokerဆီမှာ Margin Loan Accountဖွင့်ရပါမယ်။ သူများပိုက်ဆံ ယူသုံးတာ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘာလုပ်လုပ် Carrot & Stickကတော့ ရှိတာပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ Skillနဲ့ Experienceရှိလာပြီဆိုရင် Carrotများများ၊ Stickနည်းနည်းဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
Margin Loanဖွင့်ရင် အိမ်ကြွေးလျှောက်သလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Financial Statementတွေ၊ Assetဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲ စသဖြင့် ဖြည့်ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Brokerက အတိုးလိုချင်တာကိုး။ အတိုးမှန်ဖို့က ကိုယ့်မှာဝင်ငွေမှန်(သို့)ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ Loan Amountကတော့ သာမန်အိမ်ကြွေးလောက် များလေ့မရှိပါဘူး။ Professional တွေကတော့ များတာပေါ့။ သိန်းသန်းချီနိုင်တယ်။ စလုပ်လုပ်ချင်းလူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ အနည်းဆုံး ၂၀,၀၀၀လောက်ကနေ ၅၀,၀၀၀လောက် ချေးသင့်တယ်။
Margin Accountရပြီဆိုရင် Brokerက ကိုယ့်ကို Credit Cardပေးထားသလို ၅၀,၀၀၀ဆိုလည်း ၅၀,၀၀၀အလျောက် အဲဒီ့လောက်အထိချည်းမယ်ဆိုပြီး Credit Limitချပေးထားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝယ်တာများလာရင် များလာသလို အဲဒီ့Limitဟာ ပြည့်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Margin Accountနဲ့ ဘယ်လို Tradeလုပ်သလည်း ကြည့်ရအောင်။
Margin Accountနဲ့ Stockတိုင်း ဝယ်လို့မရပါဘူး။ Brokerတိုင်းမှာ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့agroup of Blue-chip / Big corporate Stocksတွေရှိပါတယ်။ Small cap(သို့)နာမည်သိပ်မရှိတဲ့ Stockတွေဆိုရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ကိုယ်ပဲ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ Riskများတာကြောင့် Brokerက သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးမဝယ်ပါဘူး။ စိတ်ချရတဲ့ အိမ်ဝယ်ရင်တောင် အလွန်ဆုံး ၉၀%ပဲချေးတတ်တာမို့ Paper Assetဖြစ်တဲ့ stockလိုဟာမျိုးကတော့ အလွန်ဆုံးချေးရင် ၇၅%လောက်ပဲ ချေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ ၁သိန်းဖိုးဝယ်မယ်ဆိုရင် Brokerက ၇သောင်းခွဲပဲ ချေးမယ်ပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ ၂၅,၀၀၀ အိတ်စိုက်ရပါမယ်။
Individual Stockတစ်ခုချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီး ချေးမယ့် ရာခိုင်နှုန်းတွေလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ သိပ်Volatileမဖြစ်တဲ့ stockဆိုရင် ၇၅%ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် နည်းနည်းလှုပ်တတ်တဲ့ Stockဆိုရင်တော့ ၆၀%(သို့)၅၀%လောက်အထိပဲ ချေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ%တွေဟာလည်း Brokerရဲ့ Discretionအတိုင်း အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Blue-chip stockတွေကို ကြည့်ရင် ကိုယ့်Brokerက ဘယ်လောက်%ချေးမလည်းဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။ မရှိတော့လည်း Margin Accountနဲ့ Tradeလို့မရဘူးပေါ့။
Margin Accountနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင် သိရမယ့် Financial Termလေးတွေရှိပါတယ်။ ပထမက Portfolio Value။ Portfolio Valueဆိုတာရှင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Portfolio ရဲ့ Market Value (သို့) ပေါက်ဈေးတိုင်းတွက်ထားတဲ့ Latest Valueပေါ့။ ဒုတိယက Lending Value - ဒါကတော့ ကိုယ်ချေးထားတဲ့ %အတိုင်း အချိုးညီတဲ့ ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ထားတဲ့ Valueပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် Brokerပိုက်ဆံပေါ့။ တတိယက ကိုယ်ဝယ်တုန်းက သူချေးထားတဲ့ တကယ့် Loan Amount / Loan Balanceပါ။ Portfolio နဲ့ Lending Valueဟာ Marketနဲ့ အညီလိုက်ပြောင်းနေပါမယ်။ Loan Amountကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဝယ်ရောင်းလုပ်တာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲပါမယ်။
ပြောရလွယ်အောင် Traderတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ငွေ ၃၀,၀၀၀နဲ့ Brokerငွေ ၇၀,၀၀၀ ယူပြီး ၁၀၀,၀၀၀ တန်Portfolioကို Buildလုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့။ ၅၀တန် Stockတစ်ခုကို ကိုယ့်ငွေပဲသုံးပြီး Investလုပ်တဲ့သူနဲ့ Marginနဲ့ Tradeလုပ်တဲ့သူ အခြေအနေကောင်းခဲ့ရင် ဘယ်လိုကွာသွားမလည်း ကြည့်ရအောင်။
တစ် Unit = $50၊ ၃၀,၀၀၀ပိုက်ဆံရှိရင် Unit 600ရပါမယ်။ တစ်နှစ်ကြာတော့ ၇၀ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါစို့။ သူ့ရဲ့ Profitဟာ ၇၀-၅၀ x ၆၀၀ = ၁၂,၀၀၀ မြတ်ပါမယ်။ ကြားထဲမှာ Dividendက တစ်Unitကို တစ်နှစ်ကို ၁ကျပ်ရတယ်ဆိုရင် Dividendဘက်က ၆၀၀ထပ်ရပါမယ်။ ဒီတော့ Total Return ဟာ ၁၂၀၀၀ + ၆၀၀ = ၁၈,၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ် Unit = $50၊ ၁၀၀,၀၀၀ပိုက်ဆံရှိရင် Unit 2000ရပါမယ်။ တစ်နှစ်ကြာတော့ ၇၀ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါစို့။ သူ့ရဲ့ Profitဟာ ၇၀-၅၀ x ၂၀၀၀ = ၄၀,၀၀၀ မြတ်ပါမယ်။ ကြားထဲမှာ Dividendက တစ်Unitကို တစ်နှစ်ကို ၁ကျပ်ရတယ်ဆိုရင် Dividendဘက်က ၂,၀၀၀ထပ်ရပါမယ်။ ဒီတော့ Total Return ဟာ ၄၀,၀၀၀ + ၂,၀၀၀ = ၄၂,၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုးက တစ်နှစ်ကို ၅%ပေးရတယ်ဆိုရင် ၇၀,၀၀၀ x ၅% = ၃,၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၄၂,၀၀၀ကနေ ၃,၅၀၀ ပြန်နှုတ်တော့ ၃၈,၅၀၀ကျန်ပါမယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်Investလုပ်ခဲ့တဲ့ Stockက မှန်မှန်လေး Trendနေနိုင်မယ်ဆိုရင် Marginနဲ့ဟာ ပိုပြီး Effectiveဖြစ်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ ဒါက Sunny Day Scenario။ ကိုယ်ရွေးခဲ့တဲ့ Stockက ရှုံးခဲ့ရင်ရော။
Tradingမှာ အမြဲမှန်တဲ့ Conceptရှိပါတယ်။ Rewardနဲ့ Risk Ratioဟာ အမြဲအချိုးညီပါတယ်။ Rewardက များမယ်ဆိုရင် Riskလည်းများပါမယ်။ (ဒါကြောင့်လည်း Riskမရှိသလောက်နည်းတဲ့ ဘဏ်တိုးဟာ Rewardကလည်း ဖွတ်လောက်ရပါတယ်။) ဒီတော့ Margin Tradingမှာ ရှုံးခဲ့ရင် Brokerက သူ့ပိုက်ဆံလေးပါမသွားအောင် Designလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Margin Callလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Market Volatileဖြစ်လို့ Sell-off ဖြစ်ခဲ့ရင် Brokerဟာ Lending Valueကို တွက်နေပါမယ်။ Lending Valueဟာ Loan Balanceအောက် ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် သူ့ပိုက်ဆံထိပြီမို့ ကိုယ့်ဆီကို Phoneလှမ်းဆက်ပါလိမ့်မယ်။ Margin Call ခေါ်ခံရပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က ဘာလုပ်နိုင်သလည်း။ လုပ်နိုင်တာ သုံးခုရှိပါတယ်။
၁) ကိုယ့်ငွေထပ်ထည့်ပြီး Loan Balanceကို ကျသွားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
၂) ရှိတဲ့ stock တစ်ချို့တစ်ဝက်(သို့) အကုန်ရောင်းပြီး Lending Valueကျသွားအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
၃) ဒါမှမဟုတ် တခြားBrokerဆီက Stockတွေကို Transferလုပ်ပြီး Lending Valueကျသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်(၃)ကတော့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Margin callထိရင် Usually ၂၄နာရီအတွင်း အဲဒီ့ Option ၃ခုထဲက တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာမို့လို့ပါ။ (၃)က အချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်ငွေထပ်ထည့်၊ ပိုက်ဆံမရှိတော့လည်း ရှိတဲ့ Stockလေးရောင်းပေါ့။ ဒါကြောင့် Sell-offဖြစ်ရင် ဈေးကျ၊ ဈေးကတော့ Margin Callတွေထိ၊ Margin Callတွေထိတော့ ထပ်ရောင်းကျနဲ့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်နေတာပါပဲ။
Stockက ၁၀% ရှုံးတယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ဆိုရင် ၃၀၀၀ ပဲ ရှုံးပါမယ်။ Marginနဲ့ဆိုရင် ၁၀,၀၀၀ရှုံးပါမယ်။ အဲဒီ့တစ်သောင်းဟာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံက ၃၀,၀၀၀ဆိုတော့ ၃၃% တကယ်ရှုံးတာပါ။ ရှုံးရှုံးမြတ်မြတ် အတိုးကလည်း ပေးရဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် အတိုးကို Dividendလေးကတော့ နည်းနည်းကာမိမှာပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် Margin Loanရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို အပေါ်ယံတော့ သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ နှစ်ဘက်သွားဓါးလိုပဲ မသုံးတတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လျှနိုင်တာ Margin Loanပါပဲ။ သုံးတတ်လာရင်လည်း အချိန်အတူတူတွင်းမှာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံပဲသုံးနေတဲ့သူတွေထက် ကိုယ်က ခရီးပိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ Stockရွေးတဲ့နေရာမှာ Dividend ကောင်းကောင်းပေးတဲ့ Stockကို ရွေးနိုင်ရင် အဲဒီ့ Dividendဟာ Loan Interestကို တော်တော်များများCoverလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Stop-loss ကတော့ Margin Loanနဲ့ Investလုပ်မယ်ဆိုရင် မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကမထားလည်း Brokerဆီက သာယာတဲ့ Phone Callလေး အချိန်တန်ရင် ရပါလိမ့်မယ်။
PS : Please do not treat this post asafinancial advice. Please consider carefully whether Margin Loan are appropriate for your investing/trading skills and experience and your financial goals.
Posted by Aung Myo Htet at 1/22/2010 08:18:00 PM
Labels: gearing, leveraging, margin loan, Trading Plan
Money Minded January 28, 2010 2:31 AM
ဗဟုသုတ ယူသွားတယ် Bro ။ ကျေးဇူးအထူး။
Soe Min May 02, 2010 2:49 PM
Thanks for sharing. I'm still hesitate to trade stock. But like to do technical analysis on some interesting stocks. Tweet me (direct message) whenever you have some particular stocks in favour.